File တွေကူးယူတဲ့နေရာမှာ မြန်စေမည့် Tearcopy
Copy Delete »
Posted by : ကိုထက် Saturday, May 5, 2012
ကွန်ပျူတာကနေ flash drive, sd card, phone, external HDD, စတဲ့ device တွေကို copy ကူးရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲ့ဒီ့ device ကနေ ကွန်ပျူတာထဲကို copy လုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းကို မြန်ဆန်စေမယ့် software ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းသွင်းတဲ့သူ software တွေ ကူးပေးတဲ့သူတွေ၊ data တွေကို copy ကူးတဲ့သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ် တင်ထားရမယ့် software ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ရိုးရိုးအတိုင်း သာကူးနေမယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းကြာတယ်ဆိုတာ အားလုံးပဲ သိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်. ကျွန်တော့်စက်မှာလည်း အမြဲ တင်ထားတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်။ကူးတာ မြန်တယ် မမြန်ဘူးဆိုတာတော့ လက်တွေ့ စမ်း ကြည့်လိုက်ရင် သိပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့ software ဆိုရင်တော့ အားလုံးပဲ စိတ်ချလက်ချနဲ့ သုံးရဲလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. file size သေးရင် မသိသာပေမယ့် size ကြီးတွေကို copy, paste လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ လုံးဝသိသာသွားပါလိမ့်မယ်. ပြီးတော့ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် tutorial movie တွေ တင်ပေးတဲ့အခါမှာ ဒီ software နဲ့ လုပ်ပြ ကူးပြတာတွေ ပါလာပါလိမ့်မယ်. အဲ့အချိန်ကျရင် ဘယ်လိုကြီးလဲဟ လုပ်ပြတာလို့ မထင်ရလေ အောင် ကြိုပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်. ရှင်းပြတဲ့အချိန် အရမ်းကြာသွားရင် ဆိုက်ကြီးသွားမှာစိုးလို့ အမြန်ဆုံး ရှင်းပြပြီး record လုပ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ခေါက်နဲ့ မရှင်းရင် နှစ်ခေါက် ပြန်ကြည့်ပေးပါ. အခု software က ထည့်တတ်တဲ့သူနဲ့ မထည့်တတ်တဲ့သူအတွက် ခွဲထားတာပါ. software က သတ်သတ်၊ ရှင်းပြချက် video ဖိုင်က သတ်သတ် ခွဲတင်ထားပေးပါတယ်.
အောက်မှာ လင့် သုံးမျိုးနဲ့တင်ထားပေးပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့လင့်က နေသယ်ရင်းတို့ ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Tearcopy ဆော့ဝဲ အား ဒေါင်းယူရန်
Mediafire မှ Ziddu မှ ifile.it မှဒေါင်းရန်
Tearcopy ရှင်းပြချက် VIDEO အားဒေါင်း ယူရန်
ကျွန်တော့်အကိုကြီး ကိုညီနေမင်းဆိုဒ်မှ ပြန်လည်ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်... ကျေးဇူတင်လျှက်ပါ